ကျွန်တော်၏ ကျောင်းသားဘ၀များ အပိုင်း (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျွန်တော်၏ ကျောင်းသားဘ၀များ အပိုင်း (၁)
ကျွန်တော်၏ ကျောင်းသားဘ၀များ အပိုင်း (၁)
Posted by sorrow on Aug 21, 2014 in My Dear Diary | 31 comments
ငါကြီးက တကယ်တော့ မင်းလေးရဲ့ကောင်းကင်အမိုးအောက်.
မကြူတတ်ဘူးရယ်…ခုမှ ဂီဂီလေး ဆီက သင်တုန်း…အဟေးဟေး
တကယ်က ကျောင်းသားဘ၀အကြောင်းလေးရေးမလို့ရယ်…တဏှာဆိပ်က ငယ်ထိပ်တက်နေလို့ ….
” ဘာ ” အထူးအဆန်းဂြိဟ်သားတကောင်ကိုတွေ့သည့်နှယ့်
” ဟကောင်..ကျောက်ရူး…မေမြို့သားအုပ်ထဲ တစ်ယောက်ထဲနေမလို့ ..
အဆောင်မှုး အန်ကယ်ကြီးက ရိုးပုံရိုးလက် ချမ်းသာပုံရသည့် ..
နောင်တွင် အရပ်မြင့်မြင့်နှင့်အနည်းငယ်ပိန်သွယ်သဖြင့် ပဲတောင့်ရှည်ဟု
အမည်ရလာမည့် မိုးကုတ်သား ကိုပြောသည့်စကား ။
မေမြို့သားများကို ထိုမျှလောက် အယုံအကြည်ရှိပါသည် ။
မေမြို့သားဆိုသည် မှာ ချယ်ရီပင်များအောက် ပန်းအကြွေကောက်သည့်
နူးညံ့သည့် ပန်းမြို့တော်သားများဖြစ်သည်ကို ယနေ့ချိန်ထိ ..
ထိုအဆောင်မှုးအန်ကယ်ကြီး နားလည်မည်ဟု မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ ။
အဆောင်မှုးကိုလည်း အပြစ်မပြောသာ.. အနှစ်နှစ်အလလ မေမြို့သားတွေကို အဆောင်မှုးလုပ်ရသည့် ၀ဋ်ကနည်းသည်မဟုတ်…
ပန်းမြို့တော်သားများကို လက်ခံရဲသည့် သတ္တိကို နည်းသည်မဆိုသာ ။
သူ့မလဲ ၀မ်းရေးမို့သာ လက်ခံရသည် ။
ထိုအချိန်က မန္တလေးဟူသည့် ရွှေမြို့တော်ကြီးတွင် ကချင်နုထွားကြီး ဆောရိုး ပညာသင်ခဲ့သည်။
တစ်ရက်သား ကျောင်းပိတ်သည်နှင့် ကျော်တို့ အဆောင်ထဲခြေငြိမ်နေကြသည် ။
ရုတ်တရက်လှမ်းမြင်လိုက်သည်မှာ အဆောင်ဘေးက အုတ်တံတိုင်းထက်တွင် …
ယောက်ျားလက်ကောက်ဝတ်လောက် အရှည်တတောင်လောက်ရှိသည့် ပုတ်သင်ညိုအပြာကြီး က အခန့်သား ။
ပုတ်သင်ညိုအပြာအထီးကြီးတွေသည် အလွန်စိတ်ဆတ်သည် ။ ကိုက်လဲကိုက်တတ်သေးသည် ။
ကျော်တို့ကချင်တွေက ပုတ်သင်ညိုတွေကို အရေခွံခွာ ဗလချောင်ကြော်လုပ်စားတတ်လို့ သိသည်။
ယောက်ျားပီသ ခန့်ညားချောမောသော ကချင်နုထွားကြီး၏ စိတ်အစဉ်တွင် နတ်ဆိုးတို့၏အမှောင်ထုကျသည် ။
( ဒါကကြော်ငြာ..ပင်ကိုယ်စိတ်ထားကောင်း သည်ဆိုတဲ့သဘော အဟိဟိ )
့ ငါးမျှားကြိုးနဲ့ ကွင်းလျောလုပ် ဖမ်းထားပြီး အနှီကံဆိုးကောင် မိုးကုတ်သား ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ခြေထောက်နဲ့ ကုတင်တိုင်နဲ့ ပူးချည်ထားလိုက်သည် ။
ဟိုငတများတော့ ညပိုင်း ဖွန်ထွက်ကြောင်ပြီး ဆယ့်တစ်နာရီလောက်မှ အုတ်တံတိုင်းကျော်ပြီး အခန်းထဲပြန်ရောက်လာလေသည် ။
သူ၏နေ့ရက်များသည် ထိုအချိန်မှစပြီး ကာလနာတိုက်သည် ။
“”ဟရောင် ကချင်ကောင် ..ဒီနေ့ခင်လာတဲ့ စော်လေး သောက်ရမ်းချောတယ်ဟ . ပုံလာကြည့် “”
” မင်းလို ..နှာဗူးများမှတ်နေလား ပဲတောင့်ရှည် … စော်ဆိုတာ ငါ့ဘ၀မှာ အပေါဆုံးဟ .. စိတ်မ၀င်စားဘူး “”
ဆိုလိုချင်သည့်သဘောမှာ …ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည် ဟူသည့်သဘော …
“မင်းသာ မဲမဲမြင်ရာ ထိုးထိုးဟောင်ပြီး ..တစ်ကောင်မှမဟပ်မိတဲ့ ..မိုးကုတ်အောင်နက် “”
အနိုင်ပိုင်းပြီး ဘေးစောင်းအိပ်နေလိုက်သည် ။
ဖရုသ၀ါစာ တေးသံသည် ..လေပြေနှင့်အတူ အခန်းတ၀ိုက် ပျံ့လွင့်လာသည် ။
နင်သွားလေသည် ။ ဆောရိုးဟူသည့် ငနဲမှာ လွန်လေပြီးသော ကာလကတည်းက ထိုသို့ထိုပုံ…
. အနှီကောင်လေးတွင် ပီတိတွေကို ကြွားချင်ရှာသည့်စိတ်နှင့်
ခေါင်းအုံးအောက်ကို လက်ထည့်ပြီး မှောက်လိုက်တဲ့သကာလ …သူ၏ကောင်းကင်တွင် လျှပ်စီးများလက်သည် ။
“” အား….ဟကောင်ကချင်ကောင်..ငါ့ကိုမြွေကိုက်ပြီဟ ” ပုတ်သင်ညိုကိုက်ရာကနေ သွေးလေးများပင်စိမ့်ထွက်လာသည် ..
ထိုတွင် .၀မ်းနည်းသူကို.ဖေးမကူညီတတ်သော ကျော်တို့ မေမြို့သားတစ်အုပ်မပင့်ပါပဲ ရောက်လာရင်းက … အချွန်နဲ့ဝိုင်းမတော့သည်။
“”ဟကောင် အဲ့တာမြွေဟောက်ရာကွ..မင်းတော့ သေပြီပဲ “”
” ပေါက်ကရပြောမနေနဲ့ .နင့်အဘမြွေဟောက်လား….အဲ့တာမြွေပွေးဟ…မနက်ကတောင် အဆောင်ရှေ့ထင်းပုံနားတွေ့သေး “”
ချွေးသီးတွေ ဇီးကင်းလောက် ဆိုသည့် စကား ..ထိုအချိန်အတိအကျတွင်မှန်ကန်လေသည် ။
“” ဟကောင် ငြိမ်ငြိမ်နေ…မြွေကိုက်ရင် ဒဏ်ရာကို ရေအရင်ဆေးရတယ်… “”
“” ရေမှမရှိတာ ..နင့်အဘ .ဘယ်လိုလုပ်မလဲ “”
“”နွားရယ်..အုံးမရှိလိုက်တာ…ရေမရှိရင် ..သေးနဲ့ဆေးပေါ့ကွာ “”
မေမြို့သားတစု ..ခွက်အဟောင်းတခုထဲ စုပြုံ သွန်းလောင်းပြီးသကာလ….မိုးကုတ်သား၏ လက်ကို ဖမ်းဆွဲနှစ်ထားလိုက်သည် ။
အသန့်အပြန့်ကြိုက်လွန်းသော ..သူဌေးသားကလေး၏ မျက်နှာသည် …ပြိုတော့မည့် မိုးအသွင်…..အသက်ဘေးကအရေးကြီးသည် မဟုတ်လော
နာရီဝက်လောက် ပွက်ပွက်ထနေပြီးတဲ့အချိန်မှာမှ ..အဆောင်မှုးရောက်လာပြီး
” ဘယ်မတုန်းမြွေ…အခန်းထဲဘယ်မြွေရောက်လာမှာလဲ “”
ခေါင်းအုံးကို ဆွဲလှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှ တွေ့ပါတော့သည် ။ မာန်ဖီနေတဲ့ ပုတ်သင်ညိုအပြာကောင်ကြီး..
ဒေါသထိန်းမရတော့သော မိုးကုတ်သားသည် …ခွက်အဟောင်းထဲမှအရည်ဖြင့် မေမြို့သားအုပ်ကို မေတ္တာရေသွန်းလောင်းပါတော့သည် ။
အဲ့နေ့က ကျော်တို့ တစ်ယောက်ငါးရာဖိုင်းတပ်ခံရပါလေသည်။ သို့သော် ပျော်သည် ။ ( စိတ်ထားဖြူသည့်သဘော…အဟိဟိ )
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀သည် တချိန်က ထိုသို့ထိုပုံ လတ်ဆတ်သစ်လွင်ခဲ့သည် ။
ငြိမ်နေစဉ်ကာလအတွင်းပင် အလွန်အအိပ်ကြီးသော မိုးကုတ်သား အိပ်နေလျှင် ခြင်ထောင်လှန်ပေးခဲ့ခြင်း
( မနက်မိုးလင်းလျှင်တစ်ကိုယ်လုံးခြင်ကိုက်ဖုများနှင့်အပြည့် ) ။
ဖွန်ကြောင်သီချင်းသွားဆိုသည်ကို မလိုက်လျှင် အိပ်ယာကို ရေပုလင်းလိုက်လောင်းပေးခဲ့ခြင်း
( မန်းလေးဆောင်းရာသီ ကြုံဖူးမှသိမည် အဟိဟိ )
ထမင်းချိုင့်တွင် ဖါးပြုတ် ။ ငါးရံ့ခေါင်းတို အရှင်လတ်လတ် ထည့်ပေးထားခြင်း ။
သွားတိုက်ဆေးဖြင့် ဆံပင်ကို ပန့်ကေ ထောင်ပေးထားခြင်း ။
အင်မတန်အသန့်ကြိုက်သော သူ၏ မျက်နှာသစ်ဆေးဗူး..သွားတိုက်ဆေးဗူး
သွားတိုက်တံ..ဆပ်ပြာများကို UN Aids မှအခမဲ့ဝေသော ကွန်ဒုံးများစွပ်ပေးခဲ့ခြင်း (sanitary purpose ကအရေးကြီးသည်မဟုတ်လော )
အစရှိသည့် လူကြီးလူကောင်းဆန်သော အပြုအမူများပြုလုပ်ကြပါသေးသည် ။ ( ငါဟဲ့ ဆောရိုး…အာဟိ )
Will be rt back..!
လူယုတ်​မာကြီး..အဲ့ဒါ​ကြောင့်​ဟိုကတစ်​​ယောက်​တည်း​နေမယ်​​ပြောတာဖြစ်​မယ်​။ အုပ်​စုလိုက်​အနိုင်​ကျင့်​တာ​ကောင်းလား။ အခုဝတ်​လည်​ပြီး တစ်​​ယောက်​တည်းကအနိုင့်​ကျင့်​တာ ကို အလူးအလဲခံ​နေရပြီမလား။
အတိုရီးရဲ့ ဖြူဖွေးလေး ဆိုတာ
ကျနော် ဟိုဒင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဖွေးဖွေးတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
အတိုရီးရဲ့ ကျောင်းသားဘဝကို ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘုန်းဂျီးကျောင်းသားဘဝကို ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် သတိတွေရသွားတယ်
(စာရှင်း။ ။ ဟိုဒင်း ဖြစ်ချင် ဆိုသည်မှာ သမီးရီးဇားဟု ဆိုလိုသည်။)
အောင်ရဲလင်းလေးရဲ့ဖွေးဖွေးဟုတ်ရပါဘူးဗျာ…ငါးပေခြောက်လောက်ရှိတဲ့ ဖြူဖွေးလေးပါ ။
အဲ့လိုတွေ ဖတ်ရတော့ မသောင်းကျန်းခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားဘွ ကို စိတ်နာလိုက်တာနော်…
ကချင်နုထွားကြီး ဆိုတော့ ဘာဘီကျူးလေး လုပ်စားလိုက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ… ငိငိငိ…
နုပြီးထွားတာတွေက ဘာဘီကျူးလို့ မကောင်းဘူးး
ကိုဂျက်နဲ့ အကြည် …ပါစင်နယ်မပါဂျေး…ပါစင်နယ်မပါဂျေး…အဟိဟိ
ကျုပ် ညွှန်းတာ မလွန်ဘူးမလားးး
နိ အပြုတ်လုပ် အဲ အလုပ်ပြုတ်ရင် စာရေးစားးး
နာ ထုတ်ဝေသူ ရှာပေးမယ်။
ဘာဘီကျူး က ပို အဆင်ပြေမယ့် လေသံပဲဟ….း)
ဂလောက် ညက်နေအောင် ရေးနိုင် ပြောင်နိုင် ရိုမန်တွေ တစ်နိုင်တဲ့လူကများ
ကျော့်ဆီ က သင်အုံးမယ်ဆိုဗဲ…
ဟိုလူယီးတွေ စကား ငှားပြောရရင်…
၀ိစသုဒ္ဓိမဂ် က ကိုရင်လေးကို
သြကာသ သင်ခိုင်းသလို ဖြစ်နေပါ့မယ် ဆြာသမားရယ်..
ကျနော် နောက်တပါတ်ထဲ လာခဲ့ပါအုံးမယ်..
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တို့က စည်းထားပါတယ်။ ဆံပင်ရှည် ဂျင်းဘောင်းဘီကြီးတွေနဲ့ မန္တလေးကို မဆင်းကြဘူး၊ သူတို့မန်းသားတွေသာ ကိုယ်တို့ဆီ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်လာကြတာလား။ ဆိုတော့ကာ ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ကဲကြတယ်ပေါ့။ တစ်ချို့ကလဲ ကန်တော်ကြီးထဲက တောအုပ်တွေကို သဘောကျလို့ သူတို့စကီလေးတွေနဲ့ လာကြတယ်ပေါ့။ ကိုယ်တို့က မြို့ခံတွေဆိုတော့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
ကိုစိုင်းခင်ဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က ကျောင်းတက်ဖော် သူငယ်ချင်းမေမြို့သားများကိုသာ ရည်ရွယ်ပါသည်ခင်ဗျာ ။ လေးစားအားကျရပါသော ကိုစိုင်းအပါအ၀င်.. နောင်တော့်နောင်တော် မေမြို့သားများအား မရိုမသေပြုလိုစိတ် အလျင်းမရှိပါကြောင်း ။ စာစုတွင်ပါဝင်သော မိုးကုတ်သားဆိုသည်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ အလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသော ..စိတ်ထားဖြူစင်လွန်းသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးသာဖြစ်ပြီး လေးစားရပါသော မိုးကုတ်သားများကို စော်ကားလိုစိတ်တစိုးတစိမျှမပါဝင်ပါကြောင်း .
ဒီစာစုများကိုဖတ်မိပြီး …နောင်တော်မေမြို့သားများ တစုံတရာ ထိခိုက်မိပါက ကျွန်တော်၏အရေးအသားညံ့ဖျင်းမှုသာဖြစ်ပါကြောင်း
.လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ဆိုတော့ကာ မိုးကုတ်ဆိုတာလဲ ခု မေမြို့ခရိုင်ထဲမှာပါပါတယ်
ကြည့်ရတာ ဒါ အကင်းပဲ ရှိသေးတယ်ထင့်
နောက်ထပ် ချောက်ချနည်းတွေ ဘယ်လောက်များ လျှိုထားသေးလဲမသိဘူး
ဒီလူရီး ကြည့်ရတာ မလွယ်ဝူး
အဆောင်နေကျောင်းသားဘ၀ကတော့ ရေးကုန်မယ် မထင်ဘူးနော်…
ပုတ်သင်ညိုကို ဘယ်လိုများ ဖမ်းလဲလို့တော့ စိတ်ဝင်စားသေးတယ်… (ခု ဈေးကြီးနေပြီလေ…။ အိမ်နောက်မှာ တစ်ကောင်အော်နေတာဖြင့် ညည ကြားတယ်…:k: )
ပြင်ဦးလွင်ကို တန်ဆောင်တိုင်တုန်းက တစ်ခေါက်ပဲ ရောက်ဖူးတယ်…။ ရုံးကို ကားလက်မှတ်မရလို့ပါ အကြောင်းပြပြီး ရက်တိုးနေခဲ့တာ..
စားကောင်းပြီး အရမ်းမခါးတဲ့ မယ်ဇယ်ဖူးသုပ်ကို ဒီအသက်အရွယ်မှာ….ပြင်ဦးလွင်တွင် တစ်ခါသာ စားဖူးပါကြောင်း။
မီးပုံပွဲသွားဖို့ ဆိုင်ကယ်ကို မြောင်းထဲကဆင်းမောင်းခဲ့ရတာ သတိရတယ်…။
ခြင်ထောင် ထောင်အိပ်စရာမလိုတဲ့ နေရာ၊ တစ်ညလုံး လူစည်တဲ့ မိုးအလင်းဆိုင်တွေ..၊ မက်မောစရာကောင်းတဲ့ သိုးမွှေးအထည်တွေ၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အသီးအနှံတွေ သတိရတယ်..။
ပုတ်သင်ညိုဖမ်းနည်းက အလွယ်လေး…. ငါးမျှားကြိုးကို ကွင်းလျောလုပ်ပြီး ..တုတ်ရှည်ရှည်တစ်ချောင်းထိပ်မှာ တပ်ပြီး ..ပုတ်သင်ညို ခေါင်းထောင်နေတဲ့အထဲကို စွပ်လိုက်တာ …ကွိကနဲ့ပဲ….အဟေးဟေး….
အေးဗျာ ကိုဆောကြီး ပြောမှ ကျောင်းသားဘ၀ ပြန်သတိရလိုက်တာ….
မန်းလေးမှာ အခုအထိ အဆောင်ရှေ.သီချင်းဆိုတာ ရှိသေးတယ်ဗျ….. ကျွန်တော် မန်းလေးရောက်တုန်းက ကျွန်တော် တူလေးတွေနဲ. အဆောင်ရှေ. သီချင်းသွားဆိုဖြစ်သေးတယ်…
ဖီးလ်ကတော့ အရင်အတိုင်းပဲ…. ဟိုကောင် ကျွန်တော်တူတွေက ဦးလေး ဦးလေး ဟိုသီချင်းဆို ဒီသီချင်းတီးဆိုပြီး အော်လို. မနဲကို လိုက်ပိတ်ရသေးတယ်.. ဟေ့ဟေ့…
ကလေးဘ၀ ကျောင်းသားဘ၀ ဆိုးလှတာတွေ အခုပြန်တွေး ရေးကာပေးတော့ ဖတ်ရသူမှာ ပြန်လည်တမ်းတ ကိုယ့်ငယ်ဘ၀။
ပျော်စရာလေးဖတ်ပြီး မနာလိုဘူးကွာ…ကျုပ်ကျောင်းနေဖက်တွေလည်း အဆောင်မှာ ကမြင်းကြောထခဲ့တဲ့
မပျော်ခဲ့ရလို့…..ဒါတောင် သူငယ်ချင်းတွေအဆောင် သွားသွားအိပ်ဖြစ်သေးတယ်…ပျော်ချင်လို့
အာ​ဂျောင့့်ထင်​သား …. ကမြင်းမဲ့ ရုပ်​ကြီးပါလို့… အာဟိ
လာရောက်အားပေးသော.ပေါတောတောစာစုများအား သည်းခံဖတ်ပေးကြသော..မမဇီဇီ ။ အောင်ရဲလင်းလေး ။ အကြည် ။ ကိုဂျက် ။ ဆု ။ လေးစားရပါသော ဆြာလေး ဂီဂီ နှင့် ကိုစိုင်း ။ တဂျားလေး ။ကိုရွှေတိုက်ကြီး ။ ဦးခ ။ ဥက္ကဌကြီး ။ ဗုံကလေး တို့ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
( အကယ်ဒမီ ရသည့်လေသံဖြင့်..အာဟိ )
သူ့ကိုယ်​သူ မင်းသားမှတ်​​နေ ဖွလိုက်​ရမ​ကောင်း ရှိ​တော့မယ်​ ..
အဲဒီ မင်းသားပေါ့ ပေါက်သင်ညို ဖမ်းတဲ့အခန်းမှာ အကယ်ဒမီ ရသွားတာ… ဟဟဟဟ
အိုက် မိုးကုတ်သားက နာသာဆို.. လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ထဲဝင်နေလောက်ပြီ…
ကျုပ်ဘော်ဒါတစ်ယောက်က သူ့ကောင်မလေးကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်ချင်လို့ လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပဲ ……
ဒါနဲ့ ကျုပ်လဲ ဘာမသိညာမသိအဲဒီကောင်ကို ဂျိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဆေးတောင့်ဝယ်ပေးလိုက်တာပေါ့ ။
သူကိုတော့ နိုင်ဂျံကားက အမွှေးဆီလို့ပြောထားတာပေါ့လေ ။
ဟဲ ဟဲ ဘာပြောကောင်းမလဲ အဲဒီသကောင့်သားလည်း မျက်နှာမရ လက်ဝါးရဖို့သီသီလေးဘဲဟေ့
ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် ဒီဂဇက်ထဲလဲ ဓတ်တူနံတူတွေလာစုမိနေတာ
အဟိ… ကျောင်းသားဘဝ ဘော်ဘော်တစ်ယောက်ရဲ့ လွယ်အိပ်ထဲကို သူမသိအောင်…
“အဖော်” လေး လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာ… သူ့ကောင်မလေးနဲ့ ပြတ်ရော…
ကို ကျောက်စ် ။ ကိုကြီးဆာ ။ မွန်ကလေး ။ မွသဲ… လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါခင်ဗျာ .. မထင်ရဘူးမလား..ကျော့်ရုပ်ကလေးနဲ့ သောင်းကျန်းတာ…အဟိဟိ
ဟယ် ယုတ်မာချက်။ တခါမှမကြားဖူးဘူး။ ကမ်းကုန်ပါလားဟေ အတော်တော့ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်။ ဟိုမိုးကုတ်သားလေးစိတ်မဆိုးဘူးလားဟေ။
မမသဲရယ်….လိုက်ထိုးတာဗျာ ။ လူဆယ်ယောက်လောက်ကို သူ့ခဗျာထိုးရတော့ …ကျော်တို့တစ်ယောက်တစ်ချက်လောက်ပဲထိုးခံရတယ်.။ ငါးယောက်လောက်ထိုးပြီးရင် သူစိတ်ပြေသွားပြီ… တစ်ခါတလေ လူစေ့တက်စေ့တောင် သူ့လက်သီးစာ မစားရဘူး..ကျော်တို့ကစိတ်ထားကောင်းတယ်လေ.ဘယ်တော့မှ ပြန်မလုပ်ဘူး……..အဟီးဟီး
***ဖွန်ကြောင်သီချင်းသွားဆိုသည်ကို မလိုက်လျှင် အိပ်ယာကို ရေပုလင်းလိုက်လောင်းပေးခဲ့ခြင်း
( မန်းလေးဆောင်းရာသီ ကြုံဖူးမှသိမည် အဟိဟိ )****
ရွှေစက်တော်ဆောင်းမှာ ညမအိပ်ကြေး သောင်းကျန်းကြပြီး ခိုးအိပ်တဲ့ကောင်တွေ ရေပုလင်းလိုက် လောင်းခံရတာ သဒိရသွားဘီ
မိန်းခလေးတွေ တန်မဲ့ ချာမတွေ မျက်စိဇပါးမွေးစူးအောင် ပွေးခဲ့တာတွေ ပြန်ပြောရမှာ ရှက်လို့ မျိုချလိုက်ဘီ…ဂလု